Sida Loogu Ganacsado Ikhtiyaariyada Binary-ka leh Tusiyaha RSI | vfxAlert official blog
Tusiyaha Awoodda Qaraabada (RSI) Tusiyaha
Kadib go'aaminta bilowga iyo jihada isbedel cusub, waxaa lagama maarmaan ah in sida ugu saxsan loo go'aamiyo barta dhamaadka iyo bilowga dib u noqoshada, halkaasoo heshiisyada ka soo horjeedka la furo oo qiimaha bilowga ah lagu go'aamiyo qiimeyn dheeraad ah dhaqdhaqaaq cusub. Mid ka mid ah aaladaha farsamada ee ugu saxan sida lacag looga sameeyo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ku saabsan dib u noqoshada hanti kasta oo ganacsi waa Tilmaamaha Xooggan ee Qaraabo (RSI).
Go'aaminta dhaqdhaqaaqa isbeddellada
Sida laga soo xigtay soo-saaraha tilmaame J. Welles Wilder, marka la xisaabinayo xawaaraha dhaqdhaqaaqa qiimaha, laba dhibaato oo waaweyn ayaa u baahan in la xalliyo:
Suuqa fowdo . Ereygan macnihiisu waa xitaa dhaqdhaqaaqa mala-awaalka ah iyo qiimaha aasaasiga ah waxay sababi karaan dib-u-celin ah Tilmaanta Xoog ee Qaraabada, xitaa haddii suuqa dibedda ka deggan yahay. Waxaa loo maleynayaa in jilicsanaanta dheeraadka ah ee qiimaha ugu dambeeya ugu badnaan ay ka saareyso "buuq" calaamadaha ganacsiga ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah.
Shuruudaha qiimaynta . Waxaa lagama maarmaan ah in si cad loo qeexo qodobbada uu tilmaamuhu ku duubi doono kala-guurka wejiyada suuqa. Khibraddu waxay muujisay inay ugu fiican tahay in la qiimeeyo iyadoo la adeegsanayo cabbirka dhijitaalka ah, ee heerarka muhiimka ah lagu maleegay.
Si loo hagaajiyo tayada falanqaynta, Wilder wuxuu soo jeediyay in la go'aamiyo isbedelka qiimaha wanaagsan iyo kan tabanba marka la barbardhigo xilliyadii hore. Dheeraad ah, tilmaame RSI waxaa lagu hagaajiyay xadka 0-100 si loogu sahlo falanqaynta muuqaalka.
Si kale haddii loo dhigo, saamiga boqolkiiba ee u dhexeeya tirada "dheer" (bullish) ee iibsashada iyo baararka qiimaha "gaaban" (bearish) ee tirada la cayimay ee muddooyinka ah ayaa la go'aamiyaa. Sidaa darteed, muddooyinka xad dhaafka ah iyo kuwa xad-dhaafka ah waxaa go'aaminaya tilmaamaha RSI.
Nooca celceliska ma ahan go'aan, tusaale ahaan, nooca asalka ah; Celceliska Dhaqdhaqaaqa Smoothed (SMMA) ayaa la isticmaalaa. Waqtiga muuqaalka muujiyuhu (1978), wuxuu si fiican ugu habboonaa suuqa saamiyada, laakiin hadda Forex waa amarro badan oo baaxad leh oo aad u kacsan, sidaa darteed celceliska fudud (SMA) iyo celceliska qaaliga ah (EMA) ayaa lagula talinayaa. Sidoo kale, si aad u hesho xulashooyinka calaamadaha ganacsiga, waxaad isticmaali kartaa RSI, oo lagu dhisay xogta tilmaamayaasha kale !
Ogeysiis muhiim ah: qaaciddada ugu dambeysa, qiimaha hooseeyaha wuxuu isu rogi karaa eber, taas oo inta badan dhacda marka lagu jiro dhammaan xilliyada xisaabinta ay kor u kacdo oo, si waafaqsan, D = 0. Xaaladaha noocaas ah, qiimaha tilmaanta waxaa loo qaadaa 100 .
Dejinta iyo muuqaalka
Marka laga eego aragtida falanqaynta farsamada, tilmaamaha RSI wuxuu ka tirsan yahay kooxda oscillators: waxaa lagu muujiyey daaqad gooni ah oo ka hooseysa jaantuska qiimaha sida qalooca firfircoon, inta badan wuxuu u dhexeeyaa 0-100. Nooca qiimaha iyo tirada xilliyada (baararka, shumacyada) waa la qaabeeyey.
Nooca caadiga ah ee 'RSI overbought / oversold meelaha': isbeddel xooggan, deji heerarka 80/20, dhinaca dhinac (fidsan) dhaqdhaqaaqa 70/30. Ganacsade ganacsade binary ah ayaa ku siin kara natiijooyin deggan heerarka 70/20 iyo 60/20, laakiin waxaad u baahan tahay inaad taas ka hubiso waqtiyada kala duwan iyo xilliyada la tijaabiyay !
Intaa waxaa sii dheer, isticmaal heerka dhexe ee 50 :
Sida heer taageero / iska caabin ah oo ugu dambeyntii xaqiijineysa calaamadda bixitaanka tilmaame ee aagagga daran. Kuwa bilowga ah waa inay kaliya furaan jagooyinka markay jabiyaan heerka!
Haddii oscillatorku bilaabo inuu u dhaqaaqo inta udhaxeysa 50 iyo aagga xad dhaafka ah / xad dhaafka ah ka dib jabsiga heerka, tani waxay muujineysaa gaabis ku yimid jihada. Jaantusku wuxuu muujinayaa sixitaan ama bilowgii xoojinta, taas oo suurtogal ka dhigaysa in la isticmaalo tilmaame RSI oo ah tilmaame kanaal oo suuqa lagu galo dib u soo celinta xuduudaha. Farsamadan ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo bilaash ah ayaa aad khatar u ah waxayna u baahan tahay khibrad!
Tirada muddooyinka: nooca aasaasiga ah wuxuu adeegsanayaa 14 iyo 9. Sida waafaqsan, maalin kasta (D1) waqtiga, xogta 14-kii iyo 9-kii maalmood ee la soo dhaafay ayaa la falanqeynayaa, saacaddiiba (H1) waxaa jiri doona 9/14 saacadood, iwm. Sida dhaqanku muujinayo suuqa Forex ee hadda, RSI-25-xilli ayaa lagula talinayaa isbeddellada dhexdhexaadka ah iyo muddada-dheer, laakiin waxaan mar walba eegnaa isbeddelka iyo astaamaha hantida.
Tilmaamuhu wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah kumbuyuutarrada istiraatiijiyad badan oo kormeer ah "Odayga Saddexda Shaashadda", kaas oo dhowr waqti oo isku mid ah lagu falanqeynayo isla - sida aad arki karto; aagagga muhiimka ah ee dhammaan RSI-ga ayaa soo muuqda isla waqtigaas, taas oo xaqiijinaysa calaamadda.
Sidee istiraatiijiyaddu u shaqeyso oo keliya RSI fiidiyowga daawada. Waad dooran kartaa dallaal kasta, maanta waxaan ku ganacsaneynaa Olymp Trade :
Oscillator kasta, yareynta tirada muddooyinka waxay u oggolaaneysaa barnaamijyada calaamadaha binary-ka inay si firfircoon uga jawaabaan isbeddellada qiimaha iyo "buuqa" suuqa. Si loo ilaaliyo kalsoonida saadaasha, kuma talineyno in ka yar qiyamka soo socda:
Maalin kasta iyo toddobaadle-3 muddo;
Ganacsiga intraday - 9/14;
Waqtiga xaddiga H1-M30 ugu yaraan 5/7.
Qoraagu wuxuu kugula talinayaa adeegsiga "5% rule" sida ku cad xogta maalmihii ugu dambeeyay ee 10-15, waxaan go'aamineynaa inta u dhexeysa RSI ay ugu yaraan ugu yaraan 5% tahay maalinta ganacsiga - waxaan raadineynaa goobo laga soo galo jabsiga / bounces ka soohdimaheeda. Cillada ugu weyn waa baahida loo qabo in si joogto ah gacanta loogu hagaajiyo ballaca kanaalka; si kastaba ha noqotee, tan darteed, waxaad isticmaali kartaa qoraallada ku habboon iyo lataliyaha s.
Calaamadaha ganacsiga ee aasaasiga ah
Ikhtiyaarrada waxaa loo furay iyadoo loo eegayo calaamadaha oscillatory-ka caadiga ah: iyadoo laga soo gudbayo heerarka iyo soo-galinta / soo-saarka meelaha daran:
Aagag badan oo la iibsaday / la iibiyay . Astaamaha ikhtiyaari ikhtiyaariga ah ee guuleysta ee RSI: tixgeli kaliya PUT-ikhtiyaarka marka tilmaamuhu hoos uga soo dhaco aagga sare ee xad dhaafka ah (80/70/60 heerka), iyo kaliya CALL-xulashada markaad ka soo socoto aagga kormeerka hoose (20/30/40) heerarka):
- Had iyo jeer sug shumaca jebiya inuu ku xirmo jaantuska oo markaa kaliya furo ganacsi;
- Marka calaamadda ka soo horjeedka RSI ay muuqato, xir booska iyadoon loo eegin heerarka faa'iidada / luminta hadda.
Muhiim: fiirsan breakouts kaliya jihada of dhaqankan. Intaa waxaa dheer, waa "isbeddelka ugu weyn" iyo sixitaanka maxalliga ah iyo dib u celinta .
Fadlan ogow in bixitaanka aagagga RSI uusan macnaheedu ahayn furitaan deg deg ah. Tani waa run gaar ahaan markii tan ka hor ay jirtay waqti dheer oo xad dhaaf ah / xaalado xad dhaaf ah oo keenay "fadhiidnimada" ee oscillators iyo jebinta istiraatiijiyad shaqo ee caqli gal ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah .
Lacagta sameeyayaashu waxay ku dari doonaan mug si ay suuqa u siiyaan dardar. Ficilada male-awaalka ah ee noocan oo kale ahi waxay horseedaan dib-u-celin fiiqan oo tilmaame ah, oo waliba si dhakhso leh u dhammaata.
Ka gudubka khadka dhexe 50 . Ganacsi waa fududahay: ka soo jabka hoosta ilaa sare waxay ku dareysaa mug ama furitaanka ikhtiyaarrada Wicitaanada cusub, kor u qaadista loogu talagalay PUT-option. Waxaan ka ganacsanaa oo keliya xilliyada isbeddellada; dabaq ballaaran, waxaa fiican in lagu beddelo RSI oo loo yaqaan 'Stochastic' oo leh goobo aasaasi ah.
Ogeysiis muhiim ah: Inta badan labada lamaane iyo lacagta loo yaqaan 'cryptocurrency', qiimaha wuxuu u egyahay inuu iskuxirmo hareeraha heerarka dhexe ama eber ee oscillators, waana sababta loogu yeero "aasaasiga". Laakiin isbeddellada xooggan, safafka ayaa cidhiidhi ah oo muddo gaaban ah. Xaaladdan oo kale, waxaa fiican in la kordhiyo dhicitaanka si looga boodo sixitaanka degdegga ah iyo dib u soo noqoshada .
Kala-duwanaanta RSI . Sida had iyo jeer ah, kala duwanaansho kasta oo ku yimaada dhaqdhaqaaqa shaxda qiimaha iyo oscillators waa calaamadaha ugu xoogan ee saxitaanka dhow, dib u celinta ama dib u celinta buuxda.
Haddii khilaaf la ogaado, fiiri inta jeer ee soo dhaaftay inta udhaxeysa ugu dambayntii max / min. Haddii ay ka yar tahay 7, waxaad u baahan tahay inaad ku sugto ikhtiyaarka, ma jiro dib-u-celin ka dib 50, markaa tani waxay u badan tahay dhaqdhaqaaq mala-awaal ah (inkasta oo muddo dheer ah) waxaana lagu talinayaa in laga fogaado suuqa, iyadoo la xakameynayo RSI shaxda iyo calaamadaha binary auto .
Ku isticmaal qalab kale oo farsamo
Iyadoo aan loo eegin nooca iyo xoogga calaamadda, waxaan had iyo jeer eegnaa shaxda qiimaha. Oscillator kasta wuxuu xaqiijinayaa oo keliya laambadda iyo qaababka shaxanka waxaana si fiican loogu isticmaalaa qalabka kale ee farsamada. Isku darka badanaa la isticmaalo waa:
Khadadka isbeddellada . Hesho calaamadaha ganacsiga tooska ah ee u shaqeeya sida ku xusan jaantuska qiimaha:
- Tijaabooyin dhowr ah oo aan guuleysan iyo taabashada khadka ayaa kordhinaya kalsoonida calaamadda, gaar ahaan haddii tani ay ka dhacdo aagagga ba'an;
- Waqtiga dheer iyo isbeddelka, calaamadaha ayaa sii xoogaysanaya.
Guuritaanka celceliska iyo RSI. Marka loo eego xogteeda, Celceliska Dhaqdhaqaaqa waa la xisaabiyaa, markaa dhaqdhaqaaqiisa wuu ka duwan yahay MA oo leh xilliyadan oo kale shaxda qiimaha. Sida laga soo xigtay live Forex trading roo m tan waxaa loo isticmaali karaa in lagu aqoonsado kala duwanaanta qarsoon.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa xulashooyinka calaamadaha ganacsiga waa in loo tixgeliyaa heer iska caabin firfircoon oo xaqiijinaya isbeddelka isbeddelka weyn. Tilmaamuhu wuu ka sareeyaa; fur ama ku dar xulashooyinka CALL cusub, hoosta - PUT-option. MA isweydaarsiga calaamadaha ayaa muujinaya isbeddel dhow, in kastoo RSI laga yaabo inuu ka baxsan yahay aagagga ba'an.
Istaraatijiyad Muunad ah «RSI + Celceliska Dhaqdhaqaaqa»:
Muhiim: Xulashada khaldan ee Muddooyinka Celceliska Guuritaanka ayaa sii kordhin kara dib u dhaca maadaama RSI horeyba u yeeleysey jilicsanaan. Laguma talin in la kordhiyo muddooyinka in ka badan 1.5-2 jeer ka badan oscillator-ka .
RSI iyo tilmaame kanaalka . Haddii la dejiyo Kooxaha Bollinger halkii laga dhigi lahaa Celceliska Dhaqdhaqaaqa Istaraatiijiyadda ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah , waxaad heshaa taageero / diidmo firfircoon oo wanaagsan tani waxay suurtagal ka dhigeysaa in la galo ku dhowaad bilowga dib u noqoshada, taasoo ka dhigaysa falanqaynta xaaladda mid fudud.
Marka lagu daro Bollinger Bands, qalabka kale ee kanaalka sida TMI, kanaalka Keltner ama MA Envelopes ayaa loo isticmaali karaa si la mid ah.
Istaraatiijiyad Sample «RSI + BB»:
Talooyin ku saabsan isticmaalka ...
Haddii ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah uusan bixinaynin si loogu muujiyo tilmaamayaal dheeri ah RSI, waxaad isticmaali kartaa boosteejooyinka kale ee ganacsiga, tusaale ahaan MetaTrader. Dilaal ikhtiyaarrada furitaanka oo keliya.
Suuqa mala-awaalka ah iyo daabacaadda dhacdooyinka aasaasiga ah ee xoogga leh waxay kordhinayaan tirada calaamadaha beenta ah ee ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u nool Tan ka hor, sida caadiga ah waxaa jira dhinac u janjeera (fidsan) oo leh fiiq fiiqan. Haddii sharraxaadda lataliye otomatik ah uu ka kooban yahay Tusmada Xoog ee Qaraabada ah, gab ka dhig - way adag tahay in la go'aamiyo runta jabitaanka ama dib u noqoshada!
Had iyo jeer ka hubi calaamadda laba-geesoodka ah ee ganacsiga waqtiyada sarreeya. Markaa haddii M1-M5 la badiyay, laakiin M15-M30 waxay muujineysaa xad dhaaf, markaa maahan oo keliya intraday laakiin sidoo kale macaamil-waqtiga-gaaban ayaa had iyo jeer aan faa'iido lahayn. Eeg xaqiijinta dheeraadka ah, waxay yareyn kartaa mugga xulashooyinka soo socda, had iyo jeer ku xir calaamadaha ugu horreeya ee dib u noqoshada!
Marka jaantusku galo aagagga daran, kuwan soo socdaa badanaa way dhacaan: heerka sare ama ka hooseeya ayaa jaban, laakiin oscillator-ka ma sii dheereeyo, dib u noqosho ayaa bilaabmaysa. Qoraagu wuxuu ku tilmaamay qaabkan "lulid aan guuleysan" wuxuuna aaminsan yahay inay suurtagal tahay in suuqa la galo. Guud ahaan, tirakoobyadu waa kuwo wanaagsan, laakiin calaamaddu waa mid celcelis ahaan xoog leh, waxaan hubnaa inaan raadino xaqiijinta sii socoshada isbeddelka.
Waxaa jira fikrado iska soo horjeeda oo ku saabsan isticmaalka oscillators-ka ee xoqidda. Ganacsatada qaar, oo ku saleysan natiijooyinka tijaabinta calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah , waxay rumeysan yihiin inay taasi macquul tahay, halka kuwa kale ay u arkaan inay qalad tahay isticmaalka ereyada "overbought / oversold" muddo ka kooban buuq iyo tilmaamayaal qiimo gaaban.
Xaaladdan oo kale, waxa ugu muhiimsan ayaa ah in la go'aansado waxa loo arko "xoqidda". Waxaad lacag ku heli kartaa xitaa waqtiga M1, inkasta oo ay jiraan calaamado badan oo been ah. Haddii aan u leexanno M5-M15, oo sidoo kale loo aanayn karo in la jabiyo waqtiyada, RSI waxay bilaabaysaa inay si kalsooni leh u shaqeyso, gaar ahaan xilliyada guryaha ballaaran.
Had iyo jeer tijaabi istiraatiijiyadda xoqidda ka hor intaadan ku dhejin koontada dhabta ah, suuqa 'crypto' waxaa ugu fiican inaad gacanta ku ganacsato, M5-M15 ayaa kuu oggolaaneysa inaad tan ku sameyso dib u dhac la aqbali karo. Intaa waxaa dheer, astaamaha ugu horreeya ee ku saabsan dib u soo noqoshada suurtagalka ah iyo dhibcaha gelitaanka ee jagooyinka mudada dheer ayaa ka muuqda RSI .
Isbedelada ka sokoow, qaababka kale ee farsamo ee qadiimiga ah ayaa lagu sameeyay shaxda RSI: "Madaxa Garbaha", "Saddex Xagalka", "Calanka", "Wedge", iwm. Waxaa suurtagal ah in la go'aamiyo dhaqdhaqaaqa mustaqbalka ee tilmaame leh heer sare itimaal ahaan, iyo sidaas darteed dhaqdhaqaaqa iyo isbeddelka suuqa guud ahaan.
Qaababka tusayaasha ayaa inta badan ka sameysma wax ka horeya jaantuska qiimaha. Tani waxay u oggolaaneysaa, marka lagu daro jihada iyo dhaqdhaqaaqa, in la qiyaaso waqtiga bilowga isbeddelka suuqa. Dhammaan calaamadaha garaafka ee oscillators-ku waa xoog badan yihiin, xitaa haddii qaabku uusan si buuxda u shaqeynin, waxaad sameyn kartaa faa'iido fiican .
Soo Koobid strategy Istaraatiijiyadda ganacsiga laba-geesoodka ah waa inay qasab ku ahaato qalab lagu ogaanayo iibsiga / iibinta ugu badan iyo Tusmada Awoodda Ehelku waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Waxay si fiican u xaqiijineysaa tilmaamayaasha isbeddelka, gaar ahaan celceliska celceliska celceliskooda ugu dambeeya.